Khilaaf Dhinaca Hawada ah oo Soo Kala Dhex-galay Soomaaliya iyo Kenya | Berberanews.com
Home WARARKA Khilaaf Dhinaca Hawada ah oo Soo Kala Dhex-galay Soomaaliya iyo Kenya
Khilaaf Dhinaca Hawada ah oo Soo Kala Dhex-galay Soomaaliya iyo Kenya
Nairobi (BerberaNews)- Khilaaf dhinaca hawada ah, ayaa soo dhex kala dhex galay Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo hore ugu dhexeeyey Xiisad siyaasadeed oo fagaareyaasha Caalamka lagaga garnaqayo.
Dawladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedaysay inay faro-gelisay Maamulka hawadeeda, ka dib markii diyaarad ka soo duushay Magaalada Nairobi ay si toos ah u fadhiisatay Magaalada Kismaayo, inkasta oo ay marka hore soo martay Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Maamulka Hawada ee Soomaaliya (SCAA) ayaa Kenya ka dacweeyay Hay’adda Maamulka Hawada Qaramada Midoobay ee loo yaqaano (ICAO), sida laga soo xigtay Masuul aan la Magacaabin, sida uu Salaasada Maanta qoray Wargeyska Daily Nation oo ka soo baxa Magaalada Nairobi.
Sabtidii, Kenya waxay diwaangelisay diyaaradda Fokker 50, 5Y-JXJ oo daad-guraysay Siyaasiyiin isla-markaana fadhiisatay Kismaayo, Magaalo Madaxda Maamul-gobolleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
Bishii September, Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa diyaaradaha ku amartay in aanay Kismaayo tagi karin, iyagoon fadhiisin Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa hore waxa uga dhexeeyay Khilaaf dhinaca badda ah.
Previous articleXukuumadda Somaliland oo Shaacisay Shirweyne Qaran oo lagu Lafo-gurayo Adeegyada Caafimaad ee dalka iyo Caqabadaha jira
Next articleTurkiga oo jawaab kulul ka bixiyay hanjabaaddii uga timid Donald Trump